२२ करोड मुल्यको परेवा ! - Likhu Online
३ मंसिर २०७७, बुधबार ०६:५९ प्रकाशित
काठमाडौं: एउटा परेवाको मूल्य कतिसम्म पर्ला ? बेल्जियममा एउटा परेवा २२ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै मूल्यमा बिकेको छ ।
बेल्जियममा एउटा रेसर परेवा १९ लाख डलरमा बिक्री भएसँगै दुनियाको सबैभन्दा महंगो परेवाको कीर्तिमान कायम गरेको छ ।
न्यू किम नामको उक्त पोथी परेवाको उमेर २ वर्षको छ ।
तिव्र वेगमा उड्नसक्ने उक्त धावक परेवालाई २ सय ३७ डलरमा लिलामीमा राखिएको थियो । तर त्यसको मूल्यभन्दा कैयन् गुणा धेरै अर्थात् १९ लाख डलरमा चीनका एक व्यक्तिले सो परेवा खरीद गरे ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार परेवारको मूल्य त्यतिधेरै परेको सुन्दा उक्त परेवाका मालिक कुर्त वाउवर आफु तिनछक परेको बताउँछन् ।
पछिल्लो केही वर्षमा चीनमा परेवाको उडान प्रतियोगिता निकै लोकप्रिय बनिरहेको छ ।
त्यसैले न्यू किम नामक बेल्जियन परेवा खरीदका लागि चीनका दुईजना खरीदकर्ताहरुले लिलाम बढाबढमा बोली लगाएका थिए ।
यो परेवाले १० वर्षको उमेर हुँदासम्म फुल पार्न सक्दछ । त्यसैले करोडौँमा किनिएको यो परेवालाई समेत प्रजनन मार्फत रेसिङ परेवा उत्पादनका लागि प्रयोग गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
लिलामी संस्था पिपाका सिइओ निकोलसका अनुसार न्यू किम परेवाको किर्तिमानी मूल्य अविश्वसनीय हो ।
उनका अनुसार बेल्जियममा करीब २० हजार परेवा पालक रहेका छन् ।